उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही हुन्छ - Karobar National Economic Daily
उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही हुन्छ
query_builderMarch 14, 2017 11:56 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility473
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल धिताल । फोटो : दीपक गाउँले
सरकारले अनुगमनलाई नियमित गरेको बताए पनि बजार भने व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । चाडपर्वमा तात्ने गरेको बजार अनुगमन अन्य समयमा सेलाउन गरेको छ, जसका कारण वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ ।
हरेक सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले दोब्बर–तेब्बर मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, मिसावट, कमसल सामान बिक्री नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । त्यही काण पनि बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । सरकारले बजार व्यवस्थित गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ लाई परिमार्जन गर्न लागेको छ ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्न लागेका कार्यक्रम, हाल भइरहेको बजार अनुगमनको अवस्था, कारबाही, उपभोक्तासम्बन्धी ऐन परिमार्जनको प्रक्रियालगायतका विषयमा विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानी ः
बजारको अहिलेको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
अहिले बजारको अवस्था सुधारोन्मुख छ । पहिला बजारको मूल्य–मान्यता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जानकारी व्यवसायीमा थिएन । उपभोक्ताले कस्तो खालको सामान खरिद र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराका बारेमा स्पष्ट रूपमा जानकारी नभएकाले पनि बजारमा कमसल सामान बिक्री हुने गरेको थियो । तर, अहिले यसको जानकारी उद्योगी–व्यवसायी दुवै क्षेत्रमा छ ।
उपभोक्तामा पनि कस्तो सामान खरिद गर्ने भन्नेमा सचेतना आएको छ, जसका कारण बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ । उपभोक्ताहरू उत्पादनको बजार मूल्यका साथै ब्रान्ड, गुणस्तरयुक्त छ/छैन, म्याद नाघेका सामान छन्÷छैनन् भन्नेबारेमा राम्रो जानकारी लिएर सचेत हुन थालेका छन् ।
बजारको सरसफाइ, औषधि, क्लिनिक, खाद्य वस्तुलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा बजारको गुणस्तर बढ्दै गएको छ । उपभोक्तामा सचेतना बढेकाले पनि पछिल्लो समय बजार क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ ।
चाडपर्वका बेला तातेको बजार अनुगमन अहिले त सेलाएको देखिन्छ नि, यस्तो अवस्था किन आयो ?
हामीले कार्ययोजनाअनुसार बाह्रै महिना बजार अनुगमनलाई नियमित गरिरहेका छौं । अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा बजारमा चहलपल बढी हुने भएकाले पनि अनुगमन धेरै हुन्छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिन्छ, जसले उपभोक्ताको चहलपहल धेरै हुने गरेकाले अनुगमन पनि धेरै हुन्छ ।
सञ्चारमाध्ययमले बढी प्रचार–प्रसार गर्ने भएकाले पनि बजार अनुगमन बढी भएको महसुस भएको मात्र हो । तर, हाम्रो बजार अनुगमनको गति उही गति र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ । विभागकै वेबसाइटमा पनि दैनिक प्रगति राखिएको छ । बजार अनुगमन कम भएको छैन ।
जुन उद्देश्यले बजार अनुगमन गरिन्छ, सोही अनुसार उपलब्धि नभएको गुनासो आएको छ नि ?
अहिले बजार अनुगमन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ । बजारमा धेरै समस्या भएकाले एकैचोटि सुधार हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । सुधार भन्ने कुरा क्रमिक रूपमा हुने हो । यसलाई निरन्तर रूपमा प्रयास गरिरहेका छौं । खुला बजारमा व्यापारी–व्यवसायीको प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । त्यसले वस्तुको मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाबाट नियन्त्रण हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक पक्ष हो । तर, हाम्रो बजार सा¥है प्रतिष्ठित छैन ।
सीमित व्यापारी–व्यवसायीको हातमा बजार रहेकाले बजारको नियमन सरकारी क्षेत्रबाट बढाउनु जरुरी छ । सरकारी नियमन प्रभावकारी भए उपभोक्ता हितमा सकारात्मक काम हुन्छ । सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिन भनिरहेका छौं । म्याद नाघेका सामान बजारमा नराख्न निर्देशन दिएका छौं । सामानको मूल्यसूची हेरेर मात्र सामान खरिद गर्न भनेका छौं । सरसफाइयुक्त पसलमा मात्र सामान खरिद गर्न उपभोक्तालाई सचेत गराएका छौं ।
त्यही कारण बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ, तर पूरै सुधार गर्न अझै केही समय लाग्छ । बजार व्यवस्थित पार्न सरकारी पहलले मात्र नपुग्ने भएकाले व्यवसायीले इमानदार भएर व्यवसाय गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा उपभोक्ता स्वयं सचेत हुन आवश्यक छ ।
यो वर्ष कति अनुगमन र कारबाही गर्नुभयो ?
चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म २ हजार ४ सय ९३ व्यावसायिक फर्ममाथि अनुगमन भएको छ । यसमा १३ व्यवसायीविरुद्ध कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ । यसमा हामीले सचेत गराउने, दर्ता नभएकाले दर्ता गराउने, सरसफाइमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनको पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छौं । मूल्य बढी लिएको कसुरमा कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चारवटा मुद्दा दायर गरेका छौं ।
अन्य केही मुद्दा कारबाहीका लागि दर्ता गर्ने क्रममा छन् । मूल्य बढी लिएको र कतिपय औषधि पसल, स्वास्थ्य क्लिनिकलाई कारबाही गर्न औषधी व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य विभागलाई अनुरोध गरेका छौं । नापतौल कम भएको, मापदण्ड विपरीत नापतौलको प्रयोग गरेको कसुरमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट कारबाही भएको छ । पानी, खाद्यान्न, दर्ता नगरी सेवा दिइरहेका क्लिनिक, बढी मूल्य लिएका व्यापारिक फर्ममा कारबाही गरेका छौं ।
व्यवसायीलाई साइनबोर्ड राख्न निर्देशन, नापतौल प्रमाणपत्र पेस गर्न, सरफाइमा सुधार गर्न, म्याद नाघेका र लेबल नभएका सामान बिक्री नगर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, व्यवसाय दर्ता गर्न, मूल्यसूची राख्न, खाद्य तथा अखाद्य वस्तु अलग ठाउँमा राख्न निर्देशन दिइरहेका छौं । अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सामान नष्ट गरिएको छ ।
उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीमाथि कारबाही नै नगरेर उन्मुक्ति दिइएको छ नि ?
उन्मुक्ति नपाइकन गर्ने कारबाही अदालतले गर्ने कारबाही हो । हामीले कसुरअनुसार उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिरहेका छौं । औषधि क्लिनिकमा कारबाही भएको छ, म्याद नाघेका सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।
अनुगमन क्रममा बसले बढी भाडा लिएको भेटिएकाले ट्राफिकलाई साथमा लिएर ८ लाख रुपैयाँ जरिवान ग¥यौं । यीलगायतका अन्य उद्योगी–व्यवसायीलाई कसुरअनुसार कारबाही गरिरहेका छौं ।
उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कसुरअनुसार विभाग आफैं र अन्य सम्बन्धित निकायले समेत कारबाही गरिरहेको छ । म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, तौलमा कमी, दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, दूषित उत्पादन गर्ने, बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्दै आएका छौं ।
कारबाही गर्ने बेलामा राजनीतिक हस्तक्षेप कत्तिको आउँछ ?
मलाई कारबाही नगर्नुस् भनेर राजनीतिक हस्तक्षेप आएको छैन र मैले थाहा पाएको पनि छैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट बजार अनुगमनलाई कडीकडाइ गर्नु र नियमन गर्नु भनेर निर्देशन आएको छ । त्यहीअनुसार आपूर्तिमन्त्रीज्यूले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ ।
गल्ती गर्ने व्यवसायीमाथि छुट हुनु हुँदैन र उपभोक्तालाई राहत दिने हिसाबले अनुगमन निरन्तर र प्रभावकारी हुुनुपर्छ भन्ने निर्देशन भएको अवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा आएको छैन । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको रायसुझाव लिएर मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्दा समय लाग्ने गर्छ ।
बजार अनुगमन भइरहेको छ, कारबाही पनि भएको छ भन्नुहुन्छ, तर बजार व्यवस्थित हुन नसक्नुको कारण के त ?
बजार व्यवस्थित पार्नुका साथै उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ र नियमावली–२०५६ मा भएको व्यवस्था कारबाहीका लागि पर्याप्त छैन । त्यही भनेर आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोध ग¥यौं र मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएर ऐनको मस्यौदा परिमार्जन तयार पारिसकेको छ । यसलाई कानुन आयोगले पनि अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।
नयाँ ऐनमा उपभोक्ता ठग्नेलाई तत्काल कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई निरीक्षण अधिकृतले तत्काल फिल्डमा ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
साथै उपभोक्ताको उजुरी सुनवाई गरी न्याय दिलाउन उपभोक्ता अदालत र इजलास ७५ जिल्लामै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ताले खरिद गरेर लगेको वस्तुको गुणस्तर राम्रो नभएर र मूल्य चित्तबुझ्दो नभए सात दिनसम्म फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यीलगायत धेरै बजार व्यवस्थित गर्ने कुरा ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
कानुन पास भयो भने हामीले गरेको बजार अनुगमनको काम अझ प्रभावकारी हुन्छ । यीलगायत थुप्रै कुरा परिमार्जनका लागि परेका छन् । यो कानुन पास भएर आए बजार अनुगमनका क्रममा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
बजार अनुगमन गर्न के–के कुरामा सुधार आवश्यक छ ?
बजार अनुगमन गर्न दुई÷तीनवटा कुरामा सुधार आउन आवश्यक छ । एउटा ऐन–कानुनमा नै सुधार आउनुप¥यो र दोस्रोमा संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संरचना काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशैभर विस्तार गर्नुपर्छ । उपत्यकाबाहिर अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सिडिओसा’बहरू देशको शान्ति–सुरक्षामा व्यस्त हुनुहुन्छ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस्तो संरचनाको विकास गरिनुपर्छ । स्थानीय तहसम्म संस्थागत संरचना र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था भए अहिले भइरहेको बजारमा धेरै सुधार आउन सक्छ । उपभोक्ताले शान्त र समृद्धिमा आधारित बजार पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मार्च १५ मा मनाइने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यस वर्ष कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
संयुक्त राष्ट्र संघबाट उपभोक्तासम्बन्धी मार्गदर्शन पारित गरेको दिन १५ मार्च १९८५ को सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ । सोहीअनुसार नेपालमा पनि सो दिवस मनाइँदै आएको हो ।
यो वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस १५ मार्च अर्थात् २ चैतमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै छौं । ‘उपभोक्ता हित संरक्षणमा लगाऔं ध्यान, संरक्षण गरौं सम्पत्ति जीउ ज्यान’ भन्ने नारा तय गरी सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । ७५ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संयोजक बनाएर भव्य रूपमा यो दिवस मनाउन मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।
उपत्यकामा विभागले यसका लागि विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सडकमा उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम, कलेज स्कुलमा अन्तक्र्रिया, हाजिरीजवाफ कार्यक्रम, वक्तृत्वकलाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै छौं । उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम मिडियाबाट पनि प्रचार–प्रसार गर्ने काम भइरहेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइन्छ, तर नारामै सीमित बनेको देखिन्छ नि ?
उपभोक्ता दिवस नारामा सीमित बनेको छैन । पहिले र अहिलेकोमा धेरै फरक भएको छ । एक वर्षभित्रमा पनि उपभोक्तामा चेतनाको अभिवृद्धिसँगै बजारमा कसरी सुधार आइरहेको छ ।
व्यवसायीहरू यस विषयमा सचेत भइरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्ने हो भने दिवस नारामै सीमित छैन । यसले ठूलो भूमिका खेलेको छ भन्ने महसुस गरिएको छ ।
उपभोक्ताका अधिकारहरू के हुन् ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले उपभोक्ताका अधिकारका रूपमा ६ वटा अधिकारलाई व्याख्या गरेको छ । यसमा म गहन रूपमा जाँदिनँ, तर तीनवटा कुरालाई जोड दिन सकिन्छ— ‘राइट, च्वाइस र भ्वाइस’ ।
राइट भनेको उपभोक्ताले आफूले छनोट गरेको सामान उपयुक्त मूल्य र गुणस्तरमा पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यो बजारमा उपलब्ध हुन सकेन वा त्यसमा केही व्यवधान आएको अवस्थामा उपभोक्ताले आवाज उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार हो । उपभोक्ताले आवाज उठाइसकेपछि त्यसलाई अन्याय परेको रहेछ भने उसले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।
अर्काे राइट भनेको भ्वाइससँगसँगै राइट पनि आउनुप¥यो भन्ने कुरा हो । यी सबै कुरालाई प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । उपभोक्ता अधिकारहरू कानुनमै समावेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।
उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा पाउन सकेका छैनन् नि ?
उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार नपाएकाले पनि उपभोक्तासम्बन्धी ऐन–कानुन संशोधन गर्न लागेका हौं । उपभोक्ता अधिकार संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनसँगै संरचना पनि आवश्यक पर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार पाए पनि कानुनले त्यसलाई प्रत्याभूति दिनुपर्छ, अनि मात्र उपभोक्ताले अधिकार कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न सक्छन् । कानुनले प्रत्याभूत गरेको कुरा लिन उपभोक्तालाई जागरूक बनाउनुपर्छ, अनि मात्र उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।
ठग्ने व्यवसायी विश्व उपभोक्ता अधिकार